Ọbara nke ọbara m - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ọbara nke ọbara m
"Ọbara nke ọbara m" bụ nke isii na nwunye nke isii oge nke HBO si fantasy telivishọn usoro Game of Thrones, na 56th n'ozuzu. The merenụ dere Bryan Cogman, na gwara site Jack Bender. Ọ aired on May 29, 2016.
N'ofè Wall, bran Stark (Isaac Hempstead Wright) na Meera Reed (Ellie Kendrick) ọma gbapuru na White igwe ịga ije, ma na-enweghị ike abscond ọtụtụ n'ime ha Wights, ruo mgbe ha na-napụtara Benjen Stark (Joseph Mawle). Samwell Tarly (John Bradley)-alaghachikwuru ezinụlọ ya na Horn Hill, Bilie Gilly (Hannah Murray) na obere Sam, nzube ahapụ ha n'ebe ahụ, ma o gbanwere obi ya mgbe reuniting ya obi ọjọọ nna. Na Eze ọdịda, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) agbali iji napụta ndị Queen, Margaery Tyrell (Natalie Dormer), ma na-amụta na King Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman) ka n'otu nke okwukwe na okpueze. Gafee Warara Oké Osimiri, na Braavos, Arya Stark (Maisie Williams) jụ igbu omee ọ e kenyere ya nsi site Faceless Men, na Dothraki Sea, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)-agba ịnyịnya na Drogon na emboldens ya nwetara ọhụrụ na khalasar .
"Ọbara nke ọbara m" e ghaghị natara site akatọ na-toro nloghachi nke ọtụtụ ọwọrọiso odide, gụnyere Benjen Stark na Walder Frey, Samwell nloghachi ka Horn Hill, na Arya na mkpebi laghachi ịbụ a Stark kama na-eso ụzọ ndị Many- Kpa Chineke. The merenụ aha bụ ihe banyere a ma ama Dothraki si eji n'etiti a Khal na ya bloodriders. Na United States, ndị merenụ enweta a viewership nke 6,71 nde na ya mbụ na agbasa ozi n'ikuku.
1.1 N'ofè Wall
1.2 Na Ogwu Hill
ibé[mèzi | mèzi mkpụrụ]
N'ofè Wall[mèzi | mèzi mkpụrụ]
Bran (Isaac Hempstead Wright) na Meera Reed (Ellie Kendrick) na-agba ọsọ ahụ wights, ndị nọgidere na-eso ha si n'ọgba ahụ. Bran, ka nọ ya hụ ọhụụ, ndị àmà ọtụtụ ihe: Jaime Lannister egbu Eze Aerys Targaryen, a dragon efe efe n'elu Red Nọgidenụ, ya daa site Winterfell nke hapụrụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, nke Night King enwogha Craster ikpeazụ nwa n'ime a White Walker, Ned Stark si beheading , ogbugbu e gburu nne ya Catelyn na nwanne Robb na Red Agbamakwụkwọ, na wildfire-etiwapụ n'okpuru Eze ọdịda. Dị ka wights emechi na, a black kpuchiri chọrọ onye na-agba na-egosi na-ebibi ụfọdụ n'ime wights mgbe Anam Udeme Meera na bran jidesie ịnyịnya ya ka ha gbapụ.
Bran akpọte ga-ahụ onye na-agba bụ nwanne nna ya, Benjen Stark (Joseph Mawle), ahụ gara na-efu gabiga Wall. Benjen na-akọwa na ọ na-adụ Ndị site a White Walker n'oge a sitere na-ekpe na-anwụ anwụ, ma a napụtara site Children nke Forest site n'ịbụ ndị a kpọgide ya n'osisi na dragonglass. Ọ gwara bran na ọ chọrọ ịga bụrụ Three-eyed Raven na na-ejikwa ya warging tupu Night King abịa n'ebe ndịda.
Na Ogwu Hill[mèzi | mèzi mkpụrụ]
Sam (John Bradley-West), Gilly (Hannah Murray) na Little Sam-abata na Horn Hill, oche nke House Tarly. Sam adọ aka ná ntị Gilly ghara ikwu na ọ bụ a Wildling, n'ihi na nna-ya Randyll ịkpọasị nke Wildlings. Ha na-ji obi ụtọ kwara site Sam nne Melessa (Samantha Spiro) na nwanne mgbasa ozi (Rebecca Benson).
Na nri abalị, Randyll (James Faulkner) mkparị Sam si bookishness, ibu ibu, na enweghị ọgụ n'ike agha. Gilly ọnọ Sam, kwusịrị na Sam gburu a Thenn na a White Walker. Mgbe Sam-nne Dickon (Freddie Stroma)-ekwusi ike na White igwe ịga ije adịghị adị, Gilly-ekwu na ọ hụrụ na-eme omume onwe ya, ma na-eme otú ahụ na-ekpughe ya Wildling nketa. Leda, Randyll n'ihu mkparị Sam na Gilly, apostle Melessa na mgbasa ozi na-ahapụ ụlọ na Gilly na a huff. Randyll agwa Sam na Gilly na Little Sam pụrụ ịnọgide na Horn Hill, kama na ọ ga-na na ịkpa ụkwụ na Horn Hill ọzọ. Sam n'akpọ nọdụ nke ọma Gilly, ma mgbe ahụ, o gbanwere obi ya ma kpebie iji mee ka ya na Little Sam ya ka Citadel. Ka ha na-ahapụ, Sam na-ewe House Tarly si nna nna Valyrian ígwè mma-agha Heartsbane dị ka nke ọma.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ọbara_nke_ọbara_m&oldid=61741
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 16 Ọnwaànọ 2018, mgbe 01:40